သူငယ်ချင်းကို ချစ်သူတော်ထားရင် ဘယ်လိုတွေရှိတတ်လဲ? - Chelmo News Portal
Home›Lifestyle›သူငယ်ချင်းကို ချစ်သူတော်ထားရင် ဘယ်လိုတွေရှိတတ်လဲ?
Relationship တစ်ခုရဲ့ (၈၃)ရာခိုင်နှုန်းလောက်က သူငယ်ချင်းကို ချစ်သူအဖြစ် ရွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ အချိန်ကြာကြာ ခင်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းအဖြစ်ကနေ ချစ်သူအဖြစ်ကို ပြောင်းလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ အစပိုင်းတော့ လက်တွဲရမှာ၊ ဖက်ရမှာရှက်တာတို့ ရှိတတ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်း သူငယ်ချင်းကနေ ချစ်သူဖြစ်ဖို့ဆို စဉ်းစားရမှာက ပြတ်သွားခဲ့သည်ရှိသော် သူငယ်ချင်းရော၊ ချစ်သူရောပါ ဆုံးရှုံးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအချစ်ရေးက နှစ်ယောက်လုံးအတွက် သေချာမှသာ အစပျိုးသင့်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကလည်း အဲ့လိုတွေကြောက်လို့ ဖွင့်မပြောတာပဲ နေကြတာပါ။ တကယ်တမ်း ဒီအချစ်ရေးကို နှစ်ယောက်လုံး ယုံကြည်ချက်ရှိရှိတည်ဆောက်မယ်ဆို သူငယ်ချင်းရော၊ ချစ်သူရောပါ ဆုံးရှုံးစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။
သူငယ်ချင်းဖြစ်လို့ ကိုယ့်အကြောင်းသိတာကြောင့် ပုံမှန်အချစ်ရေးတွေထက် ထူးခြားလိမ့်မယ်လို့ အရမ်းမမျှော်လင့်ပါနဲ့။ သင့်အကြောင်းကို အရမ်းသိတာကြောင့် သင့်ကို နာကျင်အောင်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ မမျှော်လင့်ထားပါနဲ့။ သူငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ချစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် သူလည်းလူသားပါ၊ အမှားလုပ်တာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ Relationship တစ်ခုစလိုက်ပြီဖြစ်လို့ ရန်ဖြစ်တာတွေ၊ နားလည်မှုလွဲတာတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းဖြစ်လို့ အရမ်းထူးခြားသွားလိမ့်မယ်လို့ မမျှော်လင့်ပဲ သာမန် Relationship တွေလိုပဲဆိုတာ စိတ်ထဲမှာ ထည့်ထားသင့်ပါတယ်။
Realtionship တစ်ခုမှာအရေးကြီးဆုံးက ရိုးသားဖို့ပါ။ တစ်ယောက်ကြောင်း တစ်ယောက်သိနေတာဖြစ်လို့ ကိုယ့်အကြောင်းကိစ္စတွေကို ဖုံးကွယ်ထားစရာမလိုပါဘူး။ အရှိကိုအရှိတိုင်းနေရလို့ အဆင်ပြေပြီး ကိုယ်နဲ့ တိုင်ပင်ဖော်တိုင်ပင်ဖက်လည်း ဖြစ်လို့ ကိုယ့်အတွက် အလုံခြုံဆုံးရင်ခွင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အတိတ်ကသူ့အကြောင်းလည်း ကိုယ်သိထားတာဖြစ်လို့ အချစ်ရေးမှာ သူ့အတွက် အကောင်းဆုံး ဘယ်လိုရှိပေးရမလဲဆိုတာ သိနေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုပဲ သူကလည်း ကိုယ်အတိတ်မှာ ဘယ်လိုတွေခံစားခဲ့ရလဲဆိုတာသိတာကြောင့် အတိတ်ကလူလို ကိုယ့်ကိုခံစားရအောင်မလုပ်ဘူးဆိုတာ သေချာပါတယ်။
နောက်ဆုံးသူက ကိုယ့်ရဲ့အကောင်းရော၊ အဆိုးရောပါ မြင်ဖူးတဲ့သူဖြစ်လို့ သင်တို့နှစ်ယောက်အတွက်က ရှက်တာတွေ၊ နေရခက်တာတွေမရှိတော့ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းအဖြစ်ကနေ ချစ်သူဖြစ်လာတာဖြစ်လို့ သူ့ရဲ့ အတွင်းစိတ်ရော၊ သူ့ပုံစံရောကိုယ်က သိနေတာကြောင့် သူက ကိုယ်ယုံကြည်လို့ရတဲ့သူဆိုတာ ကိုယ်ကိုတိုင် သိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ရေးကို ဘယ်သူမှ ဝင်နှောက်ယှက်လို့ မရပါဘူး။
သင့်မှာ ဒီလို သူငယ်ချင်းကနေ ချစ်သူအဖြစ်ရောက်ရှိနေပြီဆို သင့်ရဲ့ချစ်သူကို အကောင်းဆုံး ဆက်ဆံပေးပါနော်။
ကြည့်ရှူသူတွေကို ဆွဲဆောင်မှုပေးနိုင်ဆုံး 2021 K Dramas
Apr 25 မှာ စစ်မှုထမ်းတာဝန်ပြီးဆုံးတော့မဲ့ EXO အဖွဲ့ဝင် Chen
နိုင်ငံပေါင်း ဆယ့်နှစ်နိုင်ငံအသီးသီးမှာကြည့်ရှူသူများစွာကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ပြီး Top5ဝင်ခဲ့ကြတဲ့ Kpop အနုပညာရှင် များ